Waxaan Badbaadiyay Duke Inkaaran - WEBTOON ONLINE BILAASH AH
Waxaan Badbaadiyay Duquun Nacalad Celceliska 5 / 5 ka mid ah 1
N / A, waxay leedahay 739 views
Asteria oo ku nool ilaalinta qabriga ilaahyada. Maalin maalmaha ka mid ah, nin qarka u saaran inuu dhinto ayaa si lama filaan ah uga soo hor muuqday, isagoo khalkhal gelinaya nolosheeda nabadeed. Ninkani ma aha mid kale oo aan ahayn Duke Erhardt, oo ah kan ugu qurxoon uguna da'da yar barasaabkii boqortooyada. Asteria waxay badbaadisaa duke dhimanaya iyadoo adeegsaneysa awoodeeda sixirka, laakiin awoodeeda sixirka ah waa la sii joogteyn karaa oo kaliya haddii ay wada joogaan. Codsigii Erhardt, waxay u timid adduunka dibadiisa waxayna noqotay duchess been abuur ah. Asteria, oo si tartiib tartiib ah ula qabsanaysa nolosheeda cusub, ma awoodi doontaa inay gaarto jacayl oo ay xalliso habaarka?!
Cutubka 14 February 28, 2021
Cutubka 13 February 22, 2021
Cutubka 11 February 16, 2021
Cutubka 9 February 12, 2021
Cutubka 8 February 8, 2021
Cutubka 7 February 8, 2021
Cutubka 6 February 1, 2021